Maxamed Salax oo ku guulaystay abaalmarinta PFA ee 2018ka | Hangool News
April 23, 2018 - Written by Hangool News 1
Hangoolnews:- Maxamed Salax ayaa ku guulaystay abaalmarinta ciyaaryahanka ugu wanaagsan xilli ciyaareedka 2017-18ka ee uu bixiyo ururka ay ku midaysan yihiin xirfadleyaasha kubbadda cagta Ingiriiska ee magaciisa loo soo gaabiyo PFA.
Image captionKevin de Bruyne ayaa abuuray jaanisyada ugu badan ee Horyaalka Ingiriiska
Maxamed Salax oo abaalmarintan ka hadlayna wuxuu sheegay in ay sharaf u tahay maadaama oo dadka codka dhiibtay ay yihiin ciyaartoy.
“Markii aan Chelsea joogay fursado badan ma helin. Wayna caddayd in aan soo noqon doono si aan qof walba u tuso kubbaddayda. Waxay ila tahay waxaan soo noqday anoo ka gadisan sidii aan ahaa markii aan tagayay, waxaana soo laabtay anoo anoo nin nimo iyo xirfadba ii soo korodhay”.
Maxamed Saalax oo noqday ciyaaryahanka ugu fiican Afrika
kooxda Liverpool oo sheegtay in ay diyaar u tahay in Saalax ay ka caawiso in uu dhaliyo goolal kale
Masar oo u soo baxday Koobka Adduunka